Halkey iskala qaadeen Ilhaan Cumar iyo Donald Trump? - BBC News Somali
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump ayaa ugu baaqay Ilhaan Cumar oo ah gabar Soomaali ah, kana tirsan aqalka Kongreska Mareykanka, inay iscasisho, kadib markii ereyo "Yuhuud naceyb" ah ay ku qortay barteeda Twiter-ka.
Ilhaan Cumar ayaa sheegtay in xildhibanaada aqalka Kongreska ee taageersan Israa'iil ay dhaqaale ka helaan kooxaha taageera Yuhuuda, arrintaasi oo sababtay in Gudoomiyaha Kongreska, Nancy Pelosi oo sheegtay in Ilhaan looga fadhiyo inay raaligeli ka bixiso hadalkaasi.
Fursad kaste waxay ku weerari jirtay Trump
Ilhaan waxaa kale oo la rumaysan yahay inay aad uga soo horjeedo qaabka Isra'iil ay ula dhaqanto Falastiin, waxaana mar ay twitter-keedu kusoo qortay in Illaahay uu dadka tuso dhibaatooyinka Isra'iil ay ku heyso Qaza.
Ilhan Cumar ayaa noqotay qofkii ugu horeeyay ee qaxooti ah, kana mid noqota aqalka Kongreska